बुवाले दिने गरेको पिडा सम्झेर अन्जु पन्तकी छोरी रोईन, भन्छिन् ‘मम्मी अब बिवाह गर्नुस’(भिडियो « Bagmati Online
बुवाले दिने गरेको पिडा सम्झेर अन्जु पन्तकी छोरी रोईन, भन्छिन् ‘मम्मी अब बिवाह गर्नुस’(भिडियो
काठमाडौं | हालै एक म्यूजिक भिडियो युट्युबमा सार्वजनिक भएको छ । गीतको बोल हो ‘धेरै माया नदेऊ मलाई, टाढा हुँदा गाह्रो हुन्छ’ । जसमा स्वर तथा संगीत अञ्जु पन्तले भरेकी छिन् भने छोरी परितोषिकाले अभिनय गरेकी छिन् । यही गीतको अन्तर्वार्तामा अञ्जु पन्त र उनको छोरी परितोषिका पन्तबीच धेरै कुराहरु भए । जहाँ गीतको कुरासँगै आमा छोरीको विवाहको कुरा पनि निस्कियो । आफ्नो विवाहप्रति छोरी परितोषिकाले भनिन् ‘सधैं त म ममीसँग हुन सक्दिनँ । त्यसैले त मैले ममीलाई जीवनसाथी खोज्न बारम्बार आग्रह गरेको छु ।’ अञ्जुलाई छोरीले नै बिहेका लागि स्वीकृति र दबाब दिएकी छिन् । तर, के अञ्जु बिहे गर्ने सोचमा पुगेकी छिन् त ?
यसमा अञ्जुले भनिन् ‘नानीले जहिले पनि मलाई किन निराश हुनुभएको भन्छिन् । मेरो डिभोर्स भएको १० वर्ष भयो । १० वर्षदेखि मलाई छोरीको साथ त छ । तर, उनी पनि पराई घर गएपछि मलाई दुख्दा तातो पानी तताएर दिने मान्छे चाहिन्छ । छोरीले बिहे गर्नैपर्छ भनेर प्रेसर दिइरहेकी छिन् । तर, मेरो सोच बिहे नै नगर्ने हो । यो मेरो इच्छा नै नभएको कुरा हो । तर, मलाई धेरैले बिहेका लागि सुझाव दिइरहनु भएको छ।’ अञ्जुलाई अहिलेसम्म बिहे गर्नुपर्छ भन्ने सोच त आएको छैन । तर, भोलिको दिनमा भइहाल्यो भने पनि उनी सहर्ष स्वीकार गर्ने पक्षमा छिन् । आफूलाई बुझ्ने, नबदलिने प्रेम गर्ने मानिस आएको खण्डमा अञ्जु बिहे स्विकार गर्ने सोचमा छिन् ।
परितोषिका सानै हुँदा अञ्जु र मनोज राजको डिभोर्स भयो । परितोषिकाले बाबुको अभाव महसुस गरिन् त ? भन्ने प्रश्नमा परितोषिकाले भनिन् ‘बच्चामा कहिलेकाहीँ त लाग्थ्यो नै । तर, मेरो ममीले मलाई आमा र बुबा दुवैको माया दिनुभएको छ । त्यसैले पनि मैले कहिल्यै पनि बुबाको मायाको अभाव भोगिनँ ।’ अञ्जुले यो प्रश्नमा थप्दै भनिन्–‘बच्चा हुँदा जन्मदिनको समयमा झमझम पानी परिरहेको थियो । बुबा आउनुहुन्छ भनेर उनले धेरै समय पर्खिइन् । पछि, केही बर्षसम्म उनले बुबालाई पर्खिने गर्थिन् । तर, विस्तारै उनलाई पनि बानी पर्‍यो ।’
उनले थपिन् ‘मलाई चौतर्फी रुपमा तनाव हुँदा पनि छोरीका कारण खुशी मिलेको छ । यसैले पनि मलाई बाँच्ने आधार मिलेको छ ।’ परितोषिका मोडलिङ गर्ने र नायिका बन्ने सोचका साथ अगाडि बढेकी छन् । उनलाई नायिका बनाउनका लागि निर्माता–निर्देशक अञ्जुको घरसम्म पुगेका छन् । अब भने अञ्जु छोरीलाई कला क्षेत्रमा ल्याउने तयारीमा लागेकी छिन् । किन आमा जस्तै गायिका बन्ने सोच नराखेको ? भन्ने प्रश्नमा परितोषिका भन्छिन् ‘मेरो गीत गाउने रहर मात्र हो । म ममीको सफलतालाई भेट्न सक्दिनँ ।उहाँ जस्तो दोश्रो कोही जन्मिन्छ भन्ने मलाई लाग्दैन । यसैले पनि रहरका लागि मात्र आउनु भन्दा नआउनु नै ठीक लाग्यो । म मोडलिङमा नै केही गर्छु ।’